KSON, San Diego’s #1 Country - Izinhlelo ze-Android ku-Google Play
- Okthoba 12, 2017
Nge KSON lokusebenza olusha, ungakwazi ukuxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili. Vele download bese uvula KSON uhlelo lwakho ukuthola ezibukwayo, okuphakelayo interactive izingoma, imincintiswano, kanye nokunye okuqukethwe ukuthi uzwa esiteshini somsakazo.
• Lalela Sebawoti zakho ozithandayo, John & uTammy in the Morning, usebenzisa ukusakaza lokusebenza
• Hlanganisa izingxoxo ne-Poll ne-Talk Emuva izici.
• Thola bese ukale iculo yakho entsha ozithandayo.
• Ungaphuthelwa beat ne zokuxhumana kanye blog izikhala elise ngqo okuphakelayo kwekhasi.
• Faka imincintiswano futhi ukudlala imidlalo for imiklomelo emikhulu efana amathikithi ekhonsathi.
• Futhi okuningi!
Thatha KSON FM 97.3 futhi 92,1 North County nawe nomaphi lapho uya khona!
Sicela uqaphele: Lolu hlelo lokusebenza izici isofthiwe Nielsen sika izilaleli nesilinganiso esizovumela ukuba unikele ucwaningo emakethe, ezifana Izilinganiso Nielsen sika TV. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nemikhiqizo yethu nesilinganiso izilaleli digital nezinqumo zakho ngokuphathelene nabo, sicela uvakashele http://www.nielsen.com/digitalprivacy ukuze uthole olunye ulwazi.
Vakashela iwebhusayithi I-imeyili kson.studio@entercom.com Inqubomgomo Yemfihlo
With the new 99,1 Uhlelo lokusebenza Mix, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
With the new 98,5 KRZ lokusebenza, ungakwazi ukuxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili.
96,5 The Buzz, I Alternative esiteshini i-Kansas City.
Nge Q102 lokusebenza olusha, ungakwazi ukuxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili.
With the new 93,3 Iplanethi Rocks lokusebenza
With the new 102 Jamz lokusebenza, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
With the 2WD lokusebenza olusha, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
RADIO 94.7 - KKDO
Rockaholics! Download le lokusebenza ukuzwa 99,9 KISW
With the 98PXY lokusebenza olusha, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
Uxhumana nesiteshi oyikhonzile somsakazo. Lalela, ukuzihlanganisa, futhi ukunqoba!
With the new 610 Ezemidlalo APP, uxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili!
107,9 ukuxubana Indys 10 zilandelana Station
With the new Izindaba 1110 / 99.3 lokusebenza WBT, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
Nikeza ifoni yakho amanye amazinyo! Download 104,3 I Shark lokusebenza yethu manje!
Uhlelo lakho ozithandayo radio entendeni izandla zakho!
Le WEEI yonke-new app Live lapha!
With the new 95.7 I-GAME lwe, ungakwazi ukuxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili.
Alternative Buffalo ukwenze manje kube lula ukuba ulalele bukhoma!
KQRC 98,9 The Rock uyiDwala esiteshini Kansas City!
Thola izinzuzo yami imayelana umhlaba wakho futhi kungakanani fun ufuna ukwenza kube
Ngohlelo lokusebenza olusha WWL, uxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili.
Ngohlelo lokusebenza olusha WAAF, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.
With the new 97,1 QMG lokusebenza, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambi!
Milwaukee sika 105,7 The Fan uye wenza ngisho lula ukulalela bukhoma.
With the new 106,3 lokusebenza iZwi, ungakwazi ukuxhumana nathi ngendlela okungakaze kwenzeke ngayo ngaphambili.
With the new 103,7 KEYN lokusebenza, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambi!
With KOIT lokusebenza 96,5, ungakwazi ukuxhumana nathi like never ngaphambili.